Rolling Shutter တံခါး China Manufacturers & Suppliers & Factory
Rolling Shutter တံခါး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Rolling Shutter တံခါး ထုတ်ကုန်များ)
လူမီနီယမ်အလွိုင်းနှင့်အတူစက်မှုအလိုအလျောက် Rolling Shutter တံခါး
လူမီနီယမ်အလွိုင်းနှင့်အတူစက်မှုအလိုအလျောက် Rolling Shutter တံခါး ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ပစ္စည်း အလူမီနီ (သံမဏိသို့မဟုတ် PC စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်) အရွယ် custom-ကို လုပ်. , စိတ်ကြိုက် (အရွယ်အစား) မော်တော်အမျိုးအစား 1, မိုးသည်းထန်စွာတံခါးသည်ကွင်းဆက်တွေနဲ့မော်တာ။ 2, လူမီနီယံတံခါးကိုသို့မဟုတ် 100KG...
နည်းပညာဆိုင်ရာ Description: 1. မော်တော် ဘရိတ်မော်တာသို့မဟုတ် SERVO မော်တာ။ ပါဝါအရင်းအမြစ် 220V / 50Hz သို့မဟုတ် 380V / 50Hz အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပါဝါ 0.55-1.5KW; F ကို: IP55 ။ operating အပူချိန်: -30-60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ 2. ထိန်းချုပ်ရေး panel က အီတလီနိုင်ငံအမှတ်တံဆိပ် SERVO control panel ထဲက။...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ Description: စက် ဘရိတ်မော်တာသို့မဟုတ် SERVO မော်တာ။ ပါဝါအရင်းအမြစ် 220V / 50Hz သို့မဟုတ် 380V / 50Hz အလုပ်လုပ်ကြသည်။...
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Crystal ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Crystal ကြိတ်စက် Shutter တံခါး အင်္ဂါရပ်များ: (Crystal roller တံခါးကို & ဆိုင် roller တံခါးကို) ပွင့်လင်း --Almost - ဆိုင်ပိတ်လိုက်သောအခါ display ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် --High Security - ဿုံတိုင်းဖွင့်လှစ် fit မှ --Electrically အစာရှောင်ခြင်းလွယ်ကူသောလိပ်တက်ဘို့ operated နှင့်စစ်ဆင်ရေးလှိမ့် ချ. ။...
ပွင့်လင်း Crystal ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
ပွင့်လင်း Crystal ကြိတ်စက် Shutter တံခါး အင်္ဂါရပ်များ: (Crystal roller တံခါးကို & ဆိုင် roller တံခါးကို) ပွင့်လင်း --Almost - ဆိုင်ပိတ်လိုက်သောအခါ display ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် --High Security - ဿုံတိုင်းဖွင့်လှစ် fit မှ --Electrically အစာရှောင်ခြင်းလွယ်ကူသောလိပ်တက်ဘို့ operated နှင့်စစ်ဆင်ရေးလှိမ့် ချ. ။...
PVC အမြင့်မြန်နှုန်း Rolling Shutter တံခါး
PVC အမြင့်မြန်နှုန်း Rolling Shutter တံခါး 1.Technical အချက်များ: ရှန်ကျန်း Hongfa ပြင်သစ်ကနေအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်နှင့်အရေးကြီးမော်တာကိုအသုံးပြုသည်နှင့် စက်မှုဇုန်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးများကဒီစက်မှုဇုန်သန့်ရှင်းသောအခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း။ 2.Main features တွေ: မိုးလုံလေလုံအကြားလေကြောင်း convection...
ပြင်ပနှင့်ပြည်ထဲရေးအလိုအလျောက် PVC Shutter တံခါး
ပြင်ပနှင့်ပြည်ထဲရေးအလိုအလျောက် PVC Shutter တံခါး ဟောင်ကောင် fa PVC မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးများတံခါးဖွင့်ထားနှင့်နီးစပ်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်လွတ်မြောက်ရန်နိုငျသောလေထုလဲလှယ်ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်ချွေတာတိုးမြှင့်။ အစဉ်အလာခက် bi-နှုတ်ဆက်စကားတံခါးများ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တံခါးကိုနှင့်အခြားလိပ်-up,...
Rolling Shutter တံခါး quick Rolling Shutter တံခါး crystal Rolling Shutter တံခါး Rapid Shutter တံခါး roller Shutter stack တံခါး PVC Rolling တံခါး Auto Repair Shutter တံခါး quick Rolling Shutter မြန်တံခါး